खिमलाल देवकोटाको जीवन : जेलमा मार्ने योजना बनाइए पनि संयोगले बाँचें | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-10-21T11:33:53.254705+05:45
personदीपेन्द्र राई access_timeभदौ १८, २०७४ chat_bubble_outline2
पूर्वसांसद डा. खिमलाल देवकोटाले नयाँ शक्ति पार्टी प्रवक्ताबाट केही समयअघि राजीनामा दिए । प्रवक्ता नरहे पनि पार्टी साधारण सदस्यचाहिँ छन् । संवत् २०३८ मा नेकपा चौथो महाधिवेशनको पार्टी सदस्य लिएका देवकोटा मोटो मशाल, एकताकेन्द्र हुँदै तात्कालिक माओवादी पार्टी प्रवेश गरे ।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य रहे पनि संविधान जारीपछि नयाँ शक्ति पार्टीसँग जोडिए । पार्टी प्रवक्ताजस्तो जिम्मेवार भूमिकामा रहे पनि राजीनामा दिएर साधारण सदस्यमात्रै रहेका अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका डा. खिमलाल देवकोटासँग रातोपाटीको मेरो जीवनका लागि दीपेन्द्र राईले गरेको कुराकानी :
दालभात, तरकारी नै मीठो लाग्छ । खानेकुरा मन नपर्ने नै हुँदैनन् । जानैपर्ने भयो भनेमात्रै रेष्टुरेन्ट पुग्छु । पुगिहाल्दा ‘ग्रीन स्न्याक्स’ खान छुटाउँदिनँ । बाध्यता पर्यो भने पकाउँछु ।
सानैदेखि सुट, टाइ लगाउँथें । बीचमा टाइ लगाउन छाडें । हिजोआजचाहिँ सुट, सर्ट, पाइन्ट लगाउँछु । पोसाकमा कम खर्च गर्नेमा पर्छु । घरव्यवहार श्रीमतीले चलाउने भएकाले पोसाकमा खर्च कति हुन्छ भन्न सक्दिनँ ।
‘स्काई ब्लु’ पोसाक मन पर्छ । तयारी पोसाक बढी प्रयोग गर्दै आएको छु । कहिलेकाहीं कपडा किनेर पनि सिलाउँछु । पोसाकको ब्रान्डप्रति त्यति सचेत छुइनँ । लगाउँदा सहज हुनुपर्यो । ह्याट, क्याप दुवै लगाउँछु ।
एकताका ६ महिनासम्म निरन्तर योगा गरें । अहिले गर्दिनँ । डाइटिङ नै नभए पनि शरीर भारी हुन थाल्यो भने कम खान्छु । मर्निङवाक निस्कन्न । शारीरिक अभ्यास गर्ने बानी छैन । ट्रेडमिलमा दौडिने बानी छैन ।
चिनियाँ क्रान्तिबारे अमेरिकी अनुसन्धाताले अध्ययन गरेर लेखेको किताब फानसेन र चीनले विश्वलाई कहिले नेतृत्व गर्छ भन्ने चिनियाँ लेखकको किताब पढ्दै छु । ‘लिडरसिप क्राइसिस’ सम्बन्धी किताब पढ्न जाँगर चल्छ । समसामयिक विषयमा लेखिरहने खगेन्द्र संग्रौलालगायतका लेखक मन पर्छ ।
सन् २०१२ मा ‘प्रस्पेक्टिभ अफ माओवेस्ट मुभमेन्ट’ नामक किताब सार्वजनिक गरेको थिएँ, त्यसैलाई ‘अपग्रेड’ गर्दै छु । मेरो निजी पुस्तकालयमा चार÷पाँच हजार किताब छन् । किताबमा वार्षिक खर्च यति नै हुन्छ भन्ने हिसाबकिताब गरेको छैन ।
घुमफिरमा असाध्यै रुचि छ । ६/७ जिल्लामात्रै पुग्न बाँकी छ । २५/३० देश घुमेको छु । घुमेकामध्ये नर्वेको ओस्लो असाध्यै मन पर्यो । एकपटक स्वीट्जरल्यान्ड पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
हिजोआज फुर्सदिलो छु । जति नै व्यस्त भए पनि मोबाइल ‘अफ’ गरेरै आराम गरौं भन्ने लाग्दैन । बरु घरमै मोबाइल छाडेर काममा निस्कन्छु । फुर्सद भइहालेमा गुगल सर्च गरेर समय सदुपयोग गर्ने बानी छ ।
घरपरिवारलाई नै भनेर आजसम्म समय छुट्याउन सकेको छैन । कहिलेकाहीं परिवारसहित घुम्न, रेष्टुरेन्टमा खान र चलचित्र हेर्न हलसम्म जाने गर्छु ।
भलिबल मन परे पनि खेलिनँ । तर, रेफ्रीसम्म गर्थें । सबै खेलप्रति उत्तिकै श्रद्धा छ ।
सामसुङ ग्यालेक्सी नट थ्री प्रयोग गर्दै आएको छु । मोबाइल श्रीमतीजीले किनिदिएकीले कति पर्यो थाहा भएन । काम चलुन्जेलसम्म मोबाइल प्रयोग गर्छु । मोबाइलमा फेसबुक, ट्वीटर हेर्ने र अनलाइन म्यागेजिन पढ्छु ।
टेलिभिजनमा समाचार हेर्छु । त्यसपछि हास्यव्यंग्य टेलिशृंखला पनि हेर्ने गर्छु । हिजोआज टीभी नहेरेको धेरै भयो । ल्यापटमै टीभी हेर्छु । घरमा भएका १४ इन्चको टीभी पुरानो हो । १५ वर्षअघि किनेको हो ।
पछिल्लोपटक हेरेको चलचित्र ‘धौली’ हो । हलसम्मै पुगेर हेरेको थिएँ । हेरेकामध्ये झोला, दंगल र प्रेमगीत पनि मन पर्यो । प्रेमगीत युट्युबमा हेरेको थिएँ । करिश्मा मानन्धरलगायत सबै कलाकार मन पर्छन् ।
वकालत छाडेर तात्कालिक माओवादीले थालेको जनयुद्धसँगै भूमिगत हुँदासमेत गल्ती गर्यो भन्नेहरू थिए । माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिमा जोडिँदा फेरि गल्ती गरे भन्ने पनि छन् । त्यतिमात्रै होइन, जागिरबाट अवकाशपछि राजनीति गरे हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् । तर, मलाईचाहिँ पश्चाताप छैन ।
म स्वस्थ छु । दीर्घरोगले समातेको छैन । अहिलेसम्म चारपटक ‘होलबडी चेकअप’ गराएको छु । रक्तचाप ‘लो’ छ । म खाना कम खान्छु । त्यही कारण स्वस्थ भएको हुँ ।
प्रशिक्षण दिनेखालको भाषण गर्ने गर्छु । मैले गर्ने भाषण आक्रामक हुँदैन । भाषण गरेकै आधारमा कहिलेकाहीं विवादमा तानिनु अस्वाभाविक होइन । भाषण गर्नअघि मस्तिष्कमा विषयवस्तुसम्म तयार गरेको हुन्छु । लेखेर तयारी कहिल्यै गर्दिनँ ।
मापसे नै नभए पनि ‘सोसलाइजेसन’ सम्म हुन्छ । वाइन भए एक पेगसम्म लिन्छु । त्योभन्दा बढी शरीरले धान्दैन ।
गीत/संगीत कमै सुन्छु । तारादेवी, आशाभोसको आवाज कर्णप्रिय लाग्छ । म बाथरुम सिंगर हुँ ।
पश्चाताप लाग्नेगरी भूल गरेको छैन । म शिक्षक थिएँ । जागिर छाडेर क्याम्पस पढ्ने निधो गर्दा भन्नेले घरदैलाको जागिर छाडेर गल्ती गर्यो भने । लोकसेवा आयोग पास गरेर निजामती कर्मचारी भएँ । स्थायी जागिर छाडेर वकालत गर्न थालें । त्यतिबेला पनि स्थायी जागिर छाडेर गल्ती गर्यो भन्ने नभएका होइनन् ।
सजाय पाउनेगरी भूल गरेको सम्झना छैन । भूल नगरे पनि परिबन्धमा परेर सजाय पाएको छु ।
म जुन घरमा बस्दै आएको छु, यो २०५६ मा बनाएको हुँ । वकालत गरेरै कमाएको पैसाले घर बनाएको हुँ । त्यतिबेला वास्तुशास्त्र हेराउने चलन थिएन, अहिले वास्तुसम्बन्धी जानकारसँग कुराकानी गर्दा घर मिलेको छैन । ‘ग्राउन्ड फ्लोर’ सम्मको हिसाबकिताब थाहा भए पनि घरको तला थपेपछिको खर्च श्रीमतीजीलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
आफूलाई यहींसम्म पुर्याउँछु भन्ने उद्देश्य कहिल्यै राखिनँ । नराख्न अनुरोध गर्छु । जब तपाईंले त्यस्तो उद्देश्य राख्नुभयो/हुन्छ भने तपाईं दुःखी हुनुहुन्छ । भनेकोजस्तो कहाँ हुन्छ र ? सोचेको सबै कहाँ पुग्छ र ।
मेरो राशी मकर हो । नहेराएकाले ग्रहदशा कस्तो छ भन्न सक्दिनँ । अहिलेसम्म ग्रहशान्ति पनि गराएको छैन । ग्रह नक्षत्रको फलप्रति विश्वास छैन ।
कपालमा केही लगाउँदिनँ । फेसियल गर्ने र अनुहारमा क्रिम लगाउने बानी छैन । कहिलेकार्ही पफ्र्युम प्रयोग गर्छु । कामविशेषले स्वदेश तथा विदेशमा आफू बसेको होटलमा सुविधा रहेछ भने स्टीम, साउनाबाथ बस्छु ।
पहिलेदेखि चिनेकासँग ‘जेन्टिल अन्डरस्ट्यान्डिङ’ मा बिहे गरेको हुँ ।
प्रयोगात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकको परिकल्पना गरेको छु । जहाँ समानता, भ्रष्टाचाररहित, सुशासन, इमानदार राजनीतिक नेता, ‘व्युरोक्र्याट्स’ हुन् । यसैगरी, मैले सुखी र खुसी भएको समृद्ध समाज चाहेको हुँ ।
आफूलाई यहींसम्म पुर्याउँछु भन्ने उद्देश्य कहिल्यै राखिनँ । नराख्न अनुरोध गर्छु । जब तपाईंले त्यस्तो उद्देश्य राख्नुभयो/हुन्छ भने तपाईं दुःखी हुनुहुन्छ । भनेकोजस्तो कहाँ हुन्छ र ? सोचेको सबै कहाँ पुग्छ र । सांसद/सभासद् भएँ । अन्तरिम संविधान बनाएँ । यो सबै हुँला भनेर लागेको थिइनँ ।
परिवारमा चारजना छौं । श्रीमती लक्ष्मी देवकोटा अधिवक्ता हुन् । एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा नितेशराज देवकोटा एमबीबीएस र छोरी निकिता देवकोटा दस जोड दुईमा अध्ययनरत छिन् ।
मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तसर्थ, डर लाग्दैन । मृत्युका नजिक नजिक धेरैपटक पुगेको थिएँ । गाउँको मानिस हुँ । घाँस काट्न जाँदा भीरबाट लडेको छु । गोठ बस्दा बाघले मलाई टेकेर बहर लगेको छ । गोठ बस्दा आगो लाग्यो । आगोमा परेर गोरु मरे पनि म भने बाँचेको थिएँ ।
यसबाहेक जनयुद्धताका जेल परें । क्रूर यातना दिन्थे । मार्ने योजना भए पनि बाहिर हल्लाखल्ला बढी भएपछि बाँचें । जनयुद्धमा धेरैपटक जम्काभेट भए पनि म माओवादी हो भनेर सेनाले पत्याएनन् । त्यसरी जोगिएको थिएँ । घेराबन्दी पर्दा भागेर होइन उनीहरूले गोली नचलाएकाले बाँचेको हुँ ।
मृत्यु सहज होस् भन्ने धेरैको चाहना हुन्छ । मेरो चाहना त्योभन्दा परको छैन ।
Sept. 14, 2017, 4:09 p.m. मुरारी प्रसाद उप्रेती
मेरो मनमा सवैभन्दा मन परेको देवकोटाज्यूकाे विचार:– " जहाँ समानता, भ्रष्टाचाररहित, सुशासन, इमानदार राजनीतिक नेता, ‘व्युरोक्र्याट्स’ हुन् "। सही विचारलाई हार्दिक नमन । साँच्चै वहाँले भनेजस्तै भई दिए देशको कायापलट देशको विकास हुँन धेरै समय लाग्दैन । तर दुर्भाग्य छ यहाँ । अाफ्नो फाईदा हुन्छ भने जनता कार्यकर्ता नेता हुन वा व्युरोक्र्यटस जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् ।
Sept. 6, 2017, 7:56 p.m. Maila Bima
Chhoro MBBS, Chori Plus2- Pahila Yehi Education System ko Khedo Khandai, hajarau Kalam Bokne Hath Haru ma Hatiyar Thamaune Yo Pisach Haina. Sabai Bhanda Dukhad Kura chai Dr. Devkota Mrityu ko Mukh bata Bachu hola - Tyo Vaeko Vae Saya Hajarau le Mrityu Baran Garnu Parne Thyena